Fiparitahan’ny laza adina bakalorea alohan’ny fotoana: tafakatra 12 ireo naiditra am-ponja | NewsMada
Mitohy hatrany ny fanadihadiana sy famotorana mikasika ilay raharaha fiparitahan’ny laza adina bakalorea alohan’ny fotoana izay nahatonga savorovoro sy resa-be tamin’ny faritra maro. Fantatra izao fa tafakatra 12 ireo efa naiditra am-ponja vonjimaika voarohirohy tamin’izany.
Isan’ny naresaka tao anatin’ny herinandro ny raharaha bakalorea. Fantatra, ankehitriny fa olona fito indray no voafonja noho ny fiparitahan’ny laza adina tamina faritra maro teto Madagasikara, isan’izany ny tao Ambatondrazaka sy tao Fianarantsoa. Fantatra, araka izany fa olona miisa enina no naiditra am-ponja tao amin’ny fari-piadidiam-pampianarana tao an-toerana izay nisehoana savorovoro sarotra novahana. Vokany, mpianatra miisa dimy sy mpampianatra iray avy any Manakambahiny –Andrefana ary mpiasa eo anivon’ny Drenetp Alaotra Mangoro iray hafa no nosamborina. Araka ny voalazan’ny loharanom-baovao dia voampanga ho nahatrarana valim-panadinana efa nomanina ireo mpianatra miisa dimy. Voarohihory ho nanaparitaka laza adina kosa ilay mpampianatra sy ilay mpiasan’ny Drenetp.
Mpampianatra Matematika iray hafa ihany koa no naiditra am-ponja ao Fianarantsoa raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo mpianatra miisa 17 voarohirohy tamin’izany taorian’ny valin’ny fampanoavana, omaly. “Ho fitsinjovana ny ho avin’ireo mpianatra ireo no antony nandeferan’ny fanjakana azy ireo” hoy i Bototsara Nathanael, Directeur de la Police Judiciaire de Gendarmerie, omaly. Nambarany ihany koa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny famotorana rehetra mahakasika ity raharaha ity ho an’ireo faritra voakasik’izany. Tanjona, hoy ny tale dia ny hamantarana ny fototry ny fimparitahan’ny laza adina.
Raha tsiahivina dia olona miisa efatra no efa notanana am-ponja eto Antananarivo momba ity raharaha ity raha telo kosa nahazo fahafahana vonjimaika, ny faran’ny herinandro teo. Isan’ireo ihany koa ilay “Proviseur” tao Imerintsiatosika Nambaran’ny loharanom-baovao fa ny alatsinainy teo no niakatra fampanovana tao Ambatondrazaka ny raharaha, naharitra ora maro ny fihainoana azy fito mianadahy tao amin’ny tribonalin’Ambatondrazaka. Angom-baovao no nahalalana fa amin’ny 4 novambra no hiakatra fitsarana ireo enina mianadahy voarohirohy amin’ity raharaha ity ao Ambatondrazaka. Tao amin’ny foiben-toeran’ny fitsarana ny taratasim-panadinana tao amin’ny kolejy Stella Maris ao Toamasina dia nahitana fa mbola ilay laza adina nisehoan’ny olona indray no notsarain’ireo mpampianatra fa tsy ilay laza adina faharoa.
Henintsoa Hani sy Sajo